हार्ड ड्राइव कमसल SSD को विशेषताहरु आधारित भए तापनि धेरै प्रयोगकर्ताहरू किनभने आफ्नो मुख्य लाभ को यस प्रकार को ड्राइव रुचि - प्रति megabyte मूल्य। र HDD रूपमा अझै पनि लोकप्रिय छन् आफ्नो रिकभरी को संभावना को प्रश्न - तेज। HDD सुधारनेवाला - यो लेख रिकभरी HDD लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम वर्णन गर्दछ।
अवसर HDD सुधारनेवाला
स्मार्ट डाटा तालिका हेर्न;
ड्राइव को क्षेत्रहरु पहुँच को समय जाँच;
भङ्ग क्षेत्रहरु को उपस्थिति को लागि प्लेट को सतह परीक्षण;
खराब ब्लक को चुम्बक सहनुपरेको द्वारा हार्ड डिस्क मरम्मत।
को HDD सुधारनेवाला यो साँच्चै दुरुस्त, एक अद्वितीय आवेदन मात्र अदृश्य खराब क्षेत्रहरु बनाउँछ कि -।
चुम्बकीय ड्राइव को रिकभरी लागि विधिहरू
कमी अन्तर्गत भङ्ग क्षेत्रहरु (वा ओछ्यानमा-ब्लक) को संख्या कम HDD बुझे गरिनेछ। त्यहाँ जो तपाईंलाई यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो - सामान्य। यो लगभग सबै विशेष उपयोगिता मा प्रयोग गरिन्छ। HDD डिस्क ठीक एक कार्यक्रम को भाँचिएको क्षेत्र रूपमा प्रयोग गर्न अयोग्य निशान। डाटा त यो अब भण्डारण गरिएको छ। यस क्षेत्र मा भण्डारण गरिएको जानकारी, हराएको छ।
दोस्रो विधि मात्र HDD सुधारनेवाला आवेदन मा प्रयोग गरिएको छ। रिकभरी समयमा, खराब-ब्लक कार्यक्रम हार्ड डिस्क क्षेत्रहरु बल बदलिने को चुम्बकीय दलहन मा कार्य। Remagnetized ब्लक फेरि जानकारी राख्ने हुन सक्छ। यसलाई पहिले नै भण्डारण गरिएको छैन नष्ट हुनेछन्।
सुधारनेवाला HDD - HDD रिकभरी लागि भुक्तानी कार्यक्रम। यो $ 90 लागत। यसलाई डाउनलोड तुरुन्तै पछि पहिलो फेला क्षेत्र इजाजतपत्र खरीद आवश्यक छ देखि एक परीक्षण संस्करण, अर्थहीन छ।
तपाईंले सुरू गर्नु अघि, तपाईंले आवेदन डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। कुनै स्थापना आवश्यक छ। तुरुन्तै उपयोगिता को सुरूवात पछि कार्यहरू एक विकल्प यसको सञ्चालन प्यानल प्रदर्शन गर्नेछ।
मुख्य सञ्झ्यालमा, विन्डोज अन्तर्गत लेखिएको ताराहरु क्लिक गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगलाई तपाईं काम गर्न चाहनुहुन्छ कुन ड्राइभ चयन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। ड्राइभ हाइलाइट र प्रारम्भ प्रक्रिया मा क्लिक गर्नुहोस्।
HDD रिकभरी प्रोग्राम लागि विन्डो चेतावनी अघि तपाईंले सबै आवेदन पूरा गर्न शुरू प्रदर्शन गर्नेछ। यदि सम्भव छ भने, धेरै कार्यक्रम बन्द, तब ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
प्रदर्शन संग चार विकल्प एक आदेश शीघ्र विन्डो फैलाउनु हुनेछ: 1 - छिटो चेक;2- परीक्षण र (वैकल्पिक) कम;3- कार्यक्रम बारे जानकारी;4- रिपोर्ट हेर्न।
पहिलो, तपाईं किबोर्ड मा "2" प्रेस गर्न आवश्यक छ। स्क्रिनमा एक नयाँ कार्य संवाद हुनेछ। यसलाई "2" मा फेरि क्लिक गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रम रिकभरी बिना स्क्यानिङ सुरु हुनेछ।
उपयोगिता को अन्त पछि तथ्याङ्क प्रर्दशन गर्दछ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक - पढ्ने जो को समय लाग्छ क्षेत्रहरु को संख्या, र खराब-ब्लक को संख्या। विपरीत पहिलो वस्तुमा भने, ठूलो संख्या, शायद, डिस्क चाँडै असफल सुरु हुनेछ, र कम्प्युटर मा काम सहज हुन ceases। छ भने उपयोगिता खराब डिस्क ब्लक फेला तपाईं बहाली संग स्क्यान गर्न चाहन्छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रहरु पुनर्स्थापना संग परीक्षण सुरु गर्न माथिको सबै कदम प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ, तर "1" बटन मा एक चयन संवाद क्लिकमा उत्तरार्द्ध मा। कि पछि रिकभरी प्रोग्राम सुरु हुनेछ। HDD सुधारनेवाला बरामद रकम र फेला क्षेत्रहरु को कुल संख्या स्क्रीन हुनेछ। परिवर्तनको वास्तविक समयमा हुनेछ।
स्क्यान - लामो प्रक्रिया। यसको अवधि घण्टा धेरै दसौं धेरै घण्टा देखि भिन्न हुन सक्छन्, त्यसैले आफ्नो कम्प्युटर जरुरी अवस्थामा लागि आवश्यक हुन सक्छ भने, पुनर्जनन मोडमा आवेदन चलान छैन।
एक बुटेबल USB ड्राइभ सिर्जना
उपयोगिता छैन Windows मा चलिरहेको भने, पुनर्जनन सधैं प्रदर्शन गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीं सञ्चालन प्रणाली एक कम स्तरमा ड्राइभ पहुँच अवरुद्ध छ। यस मामला मा, तपाईं एक बुटेबल USB फ्लैश ड्राइव सिर्जना र DOS मोड मा booting द्वारा रिकभरी प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
मुख्य विन्डो मा, लेखिएको थियो "बूट युएसबी-फ्लैश" क्लिक गर्नुहोस्।
पछि बुटेबल हुनेछ जो ड्राइव, चयन गर्नुहोस्। यसको क्षमता 1 भन्दा बढी जीबी हुनुपर्छ। तपाईंको फ्लैश ड्राइव महत्त्वपूर्ण डाटा छ भने, तिनीहरूले एउटा अलग स्थान सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
कार्यक्रम त्रुटि सन्देश रूसी प्रदर्शित गर्न HDD पुनर्स्थापना भने, एक कदम जाने र "रिसेट आकार" क्लिक गर्नुहोस्।
ड्राइभ ढाँचामा हुन्छ, प्रदर्शन चयन संवाद देखाउँछ।
भर्खरै ढाँचामा युएसबी-छडी चयन गर्नुहोस्, र ठीक क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं पूरा गरेपछि बुट ड्राइभ सिर्जना गरिने छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण कदम, तर पछिल्लो छैन - कार्यक्रम बोर्ड मा एक उपकरण सिर्जना। अब तपाईं HDD, एक फ्लैश ड्राइव संग भन्दा बुट गर्न कम्प्युटर कन्फिगर गर्न आवश्यक छ।
Delete बटन थिच्न एकपटक तपाईंले एक सन्देश देख्नु हुनेछ। बटन फरक हुन सक्छ। स्क्रिनको तल लेबल लागि बाहिर हेर्नुहोस्।
उन्नत जाने विशेषताहरु ट्याब।
"प्रविष्ट गर्नुहोस्" कुञ्जी मा बूट अनुक्रम क्षेत्र र प्रेस गर्न कर्सर सार्न।
स्थिति युएसबी-HDD 1st बूट उपकरण टगल गर्नुहोस्।
को F10 प्रमुख थिचेर परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्।
यस BIOS बाहिर निस्कन।
यी कदम पूरा गरेपछि HDD रिकभरी प्रोग्राम स्वचालित रूपमा लोड गरिएको छ।
अहिले र रूसी भाषा बोल्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि - कम्प्युटर लागि आवाज द्वारा Google खोज!
तपाईं आधुनिक मानिसको ट्याब्लेट लागि आवश्यकता के
कसरी आफ्नो कम्प्युटर पूर्ण Wajam देखि हटाउन: चरण पुस्तिका र सिफारिसहरू द्वारा चरण
एक कमर चक्कु माछा कसरी चयन गर्न। माछा काटन लागि गुणस्तर चक्कु
परी कथा, एक कथा र अन्त्यको शुरुआत
राज्य शरीर सिस्टम
प्रार्य गठन medlar - एक असामान्य फल
के एक व्यक्ति मुक्त बनाउँछ? रहस्य के हो?
पर्यावरण व्यवस्था सर्तहरू रूपमा पर्यावरण अपराध
आफ्नो हात संग भान्सा मा झूटा छत
बिरुवाले किन पहेंलो बदल्छ? यो एउटा चिन्ह हो कि केहि उनको लागि छुटेको छ